आज बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ? – LIVE 92 Media
आज बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ?
काठमाडौँ । आज जेष्ठ १८ गते (आइतबार) यूरोपियन यूरोसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढेको छ । अमेरिकी डलर लगायत केही देशको विनिमयदर भने घटेको छ ।यूरोपियन यूरो लगायत धेरै देशका मुद्राको भाउ स्थिर र कमजोर बनेको छ ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ २९ पैसा पुगेको छ।यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।त्यस्तै, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ।साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३१ रहेको छ।युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७७ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ४१ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ।बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१९ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।
Previous Article साना व्यवसायीलाई करमा ‘बम्पर’ छुट, के केमा बढ्यो कर ?
Next Article आज यूके पाउण्डसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढ्यो